'२० जनाको ज्यान जानेगरी भएको ढाका आक्रमण आइएसले गराएको होइन'
एजेन्सी, १९ असार । बंगलादेशका गृहमन्त्री अस्दुज्जामान खानले राजधानी ढाकामा भएको आक्रमण बिद्रोही संगठन इस्लामिक स्टेट आइएसले नभई स्थानीय चरमपन्थी संगठन जमीअतुल मुजाहिद्दीनले गराएको बताउनु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सस्था एएफपीसँगको अन्तर्वार्तामा गृहमन्त्री खानले उक्त घटना आइएससँग सम... विस्तृतमा
तालिवानले दियो अमेरिकालाइ धम्की : अफगानिस्तानमा आफ्नो पेसा रोक !
काबुल, १९ असार । अफगानिस्तानमा सशस्त्र विद्रोही गरिरहेका तालिवानहरुका नेताले अमेरिकालाई आफ्नो ‘पेसा’ रोक्न आग्रह गरेका छन् । तालिवानका नयाँ नेता हैबतुल्लाह अखुन्जादाले आफू सो संगठनको नेता चयन भएपछि पहिलो पटक अमेरिकालाई सो सम्बोधन गरेका हुन् । उनले इदउल फितरको पूर्व सन्ध्य... विस्तृतमा
आतंकबादीले राखेका थिए यी ३ शर्त, ढाका आक्रमण अघि
एजेन्सी, १९ असार । बंगलादेशको राजधानी ढाकामा शनिबार भएको आतंकबादी आक्रमणमा २० जनाको हत्या भएको छ । आतंकबादी संगठन आइएसले उक्त आक्रमणको जिम्मा लिएको छ ।एक रेष्टुरेन्टमा बन्धक बनाएपछि आतंकबादीहरुले बंगलादेश सरकारसँग ३ शर्त राखेको र ती शर्त पुरा नभएपछि बन्धकहरुलाई घाँटी रेटेर मारिएको अन्तराष्... विस्तृतमा
सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशका ८ विश्वविद्यालय नक्कली
लखनउ, १९ असार । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको राज्य उत्तर प्रदेशका ८ विश्वविद्यालय नक्कली रहेको भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जनाएको छ। भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मुलुकभरि २२ वटा नक्कली विश्विद्यालय रहेको सार्वजनिक गर्दा ८ वटा उत्तर प्रदेशका परेका हुन्। उत्तर प्रदेशमा उ... विस्तृतमा
ढाका आक्रमणमा नौजना इटालेली नागरिकको मृत्यु : इटाली
बङ्गलादेश, १९ असार । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकाको एक रेष्टुरेन्टमा भएको आक्रमणमा परी इटालीका नौजना नागरिकको मृत्यु भएको इटालीका विदेशमन्त्री पाओलो जेस्टिलोनीले शनिबार बताउनुभएको छ । मृतकमध्ये नौजनाको सनाखत भएको छ । अन्य एकजना घटनापछि शनिबार अबेरसम्म सम्पर्कमा नआएको पनि विदेशमन्त्री जेन्ट... विस्तृतमा
रहस्यमयी देश उत्तर कोरियाबारे यी तथ्यहरु....
काठमाडौँ, १९ असार | सिंगो विश्व आर्थिक विकास र प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । आर्थिक रुपमा सबल राष्ट्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरु पनि लोकतन्त्र र विकासकै बाटोतर्फ अग्रसर छन् । तर, विश्वमा अझै पनि एउटा यस्तो देश छ, जसको हरेक कुरा रहस्यको घेरामा हुन्छन् । १. उत्तर कोरियामा हप्ता... विस्तृतमा
बाढी र पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २५ पुग्यो !
भारत, १८ असार । भारतका उत्तरी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या शनिबार २५ पुगेको छ । उद्धारमा संलग्न सरकारी समूहले शनिबार भारतको उत्तर प्रदेश र अरुणाञ्चल प्रदेशबाट थप मृत शरीरको उद्धार गरेको बताएका छन् । यसपूर्व बाढी र पहिरोमा परी सो क्षेत्रमा नौजनाको मृत्यु भएको जनाइए... विस्तृतमा
ढाकामा बन्धक बनाइएको कम्तीमा २० बिदेशी मारिएको पुष्टि
ढाका, १८ असार । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको एक रेष्टुरेन्टबाट शनिबार बिहानीपख आतङ्ककारीहरुले कब्जामा लिएकामध्ये २० जनाको ज्यान गएको समाचार छ । उनीहरुलाई आतङ्ककारीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । ती नियन्त्रणमा लिइएका नागरिकमध्ये २० जना बिदेशी मारिएका एकजना सैनिक जर्नेलले जनाएका छन् । र... विस्तृतमा
खुल्ला ठाउँमा शव फाल्नेदेखि सँगै सुत्नेसम्म
काठमाडौँ, १८ असार | संसारमा थुप्रै किसिमका मानिसहरु बसोबास गर्दछन् । सबैको आफ्नै मूल्य, मान्यता र परम्परा हुन्छन् । यसमध्ये कुनै निकै सजिला हुन्छन् भने कुनै निकै कठिन । अझ कुनै त अचम्म लाग्दा पनि । यस्तै अचम्म लाग्दा परम्पराबारे हामी तपाईंलाई बताउँदै छौं । तिब्बत, किंगघई र मंगोलियामा अन्तिम... विस्तृतमा
ढाकामा आतङ्ककारी हमला प्रयास
ढाका, १८ असार । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा शनिबार बिहान आतङ्ककारी हमलाको प्रयास भएको समाचार छ । राजधानी ढाकामा रहेको एक विदेशी रेष्टुरेन्टमा यस्तो प्रयास भएको हो । आतङ्ककारीहरुले सो रेष्टुरेन्टमा शनिबार बिहानै आक्रमण प्रयास गरेका थिए । त्यस प्रयासलगत्तै प्रहरी पुगेपछि उनीहरुले उक्त... विस्तृतमा
पहिरोमा पुरिएका २० जनाको मृत्यु
बेइजिङ, १८ असार । चीनमा केही दिनको अविरल वर्षापछि शुक्रबार बिहान गएको पहिरोमा परी पुरिएका २० जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार बिहान गएको पहिरोमा २० जना पुरिएर रहेको शुक्रबार प्राप्त समाचारमा जनाइएको थियो । चीनको दक्षिणपश्चिमी प्रान्त गुइजोमा अविरल वर्षापछिको शुक्रबार बिहानको पहिरोमा परी ३०... विस्तृतमा
एजेन्सी, १८ असार | मध्य चीनको हुबई प्रान्तमा निर्माण भएको ओवरवाटर हाइवेलाई ९ अगस्तमा सर्बसाधारणका लागि खोलिएको छ । यस पुलबाट नदी ,पहाड र सुन्दर बस्तीहरु देख्न सकिने बताईएको छ । यस सुन्दर बेली नदी हाइवे १०.९ किमी लम्बाईको रहेको छ। यस हाईस्पीड रूट पश्चिम चीन ल... विस्तृतमा
लिबिया, १८ असार । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा मान्यता प्राप्त लिबियाली गठबन्धन सरकारले शुक्रबार आफ्ना चार मन्त्रीलाई पदबाट हटाएको छ । गठबन्धन सरकारले त्रिपोलीमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको तीन महिना नबित्दै पुराना मन्त्रीहरुलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । उनीहरु सत्ताबाट बाहिरिनुलाई उ... विस्तृतमा
अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार ट्रम्मको यस्तो छ तरुनी मोह
काठमाडाैं, १८ असार । अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनामा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार डोनाल्ट ट्रम्प पछिल्लो महिना निकै विवादमा तानिए । प्रारम्भिक निर्वाचनमा अधिकांश समय विरोधीको आलोचनामा खर्चिएसँगै उनी विवादित बनेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त उनका भनाइले धेरै अमेरिकी ट्रम्पसं... विस्तृतमा
अल्वानिया, १८ असार । तीन जना हतियारधारी लुटेराको समूहले अल्वानियाको व्यस्त तिरना विमानस्थलबाट करोडौँ युरो बोकिएको एक हतियारले सुसज्जित गाडीलाई लुटी लगेका अल्वानियाली दैनिक पत्रिकाले शुक्रबार जनाएको छ । विमानस्थलको धावनमार्गमा उक्त गाडीबाट विमानमा पु¥याउने क्रममा उक्त नगद लुटिएको बताइए... विस्तृतमा